Miyaa taageerayaasha loo ogolaan doonaa inay ka qeyb-qaataan kulanka UEFA Super Cup ee dhexmari doona Kooxaha Bayern Munich iyo Sevilla? – Gool FM
Miyaa taageerayaasha loo ogolaan doonaa inay ka qeyb-qaataan kulanka UEFA Super Cup ee dhexmari doona Kooxaha Bayern Munich iyo Sevilla?
Haaruun August 25, 2020
(Yurub) 25 Agoosto 2020. Taageerayaasha ayaa loo ogolaan doonaa inay xaadiraan kulanka UEFA Super Cup, kaasoo Budapest oo ah caasimada dalka Hungary ku dhexmari doona Kooxaha Bayern Munich iyo Sevilla marka ay taarikhdu tahay 24-ka bisha September ee soo aaddan.
Tan iyo markii uu dillaacay faafaha halista ah ee Korona Fayras waa markii ugu horreysay oo taageerayaal loo ogolaan doono inay ka soo muuqdaan tartan uu qabto xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub.
Inkastoo ay shuruud adag la socoto hadda xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa sheegay in taageerayaasha loo ogolaanayo inay xaadiraan kulanka u dhexeeya kooxaha Bayern Munich iyo Sevilla ee UEFA Super Cup.
UEFA waxa ay sheegtay in garoonka aan la wada buuxin doonin kuraastiisa wax ka badan 30% (Soddon boqolkiiba) si looga hortago faafidda Fayraska Korona, taasoo ka dhigan in kuraas badan ay noqon doonaan kuwo faaruq ah.
Garoonka Puskas ee kulankan marti gelinaya waxa uu qaadaa 67,215 oo taageerayaal ah, iyadoo garoonka loo ogolaan doono 20,164 oo taageerayaal kulanka UEFA Super Cup si loo ilaaliyo sharciga kala fogaanshaha ee uu sababay Korona Fayras.
Aalaaba kulanka Koobka UEFA Super Cup waxaa wada ciyaara kooxda ku soo guuleysatay koobka dhegaweynaha ee Champions League iyo kooxda hanatay tartanka Europa League.
Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa ku soo guuleysatay Koobka Champions League markeedii lixaad goortii ay 1-0 ku garaacday PSG, halka Sevilla ay koobka Europa League ka soo qaadday Inter Milan.
RASMI: Laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga isbuuca ee Champion League oo la shaaciyay
RASMI: Tababare Andrea Pirlo oo xaqiijiyey xiddig weyn oo xagaagan ka tagaya Kooxda Juventus